Global Voices teny Malagasy » Masedonia: Nahazo Sazy An-tranomaizina Mandritra ny 14 Taona Ilay Mpitandro Filaminanana Namono Nahafaty Tovolahy iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Febroary 2012 7:55 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherana Masedonia 2011  ity lahatsoratra ity.
Nanaparitaka hetsi-panoherana manohitra ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana ny fikasàna hanarona  ny raharaha mahakasika an'io famonoana io, izay nitakian'ireo olom-pirenen'i Masedonia fampiharana ny rariny, anatin'izany ny fisamborana ireo mpiray tsikombakomba, ny andraikitry ny fibaikoana, ary ny andraikitra ara-politika. Nolavin'ny  mpampanoa lalàna ny fangatahana ara-dalàna nataon'ny fianakavian'ilay maty mba hanenjehana ireo mpiray tsikombakomba na fantatra izany na tsia, tahaka ireo mpitandro filaminana izay teny akaiky nandritra ny famonoana sy nitsabaka tanatin'ny sehatra nitrangan'ilay famonoana avy eo, toy izany koa ireo izay voarohirohy tamin'ilay fikasàna hanarontsarona ilay raharaha.
Nisy am-polony tany ho any io fitsaràna io izay tsy voarakotra tanteraka sy tsy dia nodinihan'ny ankamaroan'ny media any Masedonia, izay miankin-doha amin'ireo dokam-barotra aloa amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Vohikala iray miavaka amin'ny maro ny PlusInfo.mk, izay namoaka topi-mason'io raharaha io  [mk] ny andro alohan'ny fanambarana ilay sazy.
Namoaka famintinana  [mk] ireo folo voalohany tamin'ity fitsarana ity ny bilaogy Justice for Martin, nosoratan'ilay mafana fo Voislav Stojanovski ary navoakan'ny  [mk] Radio Free Europe tamin'ny voalohany indrindra :
Ny 5 Jona 2011, raha nankany Skopje avy tany Kumanovo (izay niasàny amin'ny maha-mpitandro filaminana azy ho an'ny zotram-pifidianana mandritra ireo 15 ora), nanome baiko am-bava avy amin'ny alàlan'ny finday an'i Spasov ny lehibeny mba hanohy hiambina ny Praiminisitra Nikola Gruevski [sary 1 , sary 2 ]. Talohan'io zava-nitranga tany an-kianja io, nahatsikaritra izy fa niezaka hanantona ilay PM in-droa i Martin […]. Voasakan'ny mpiambin'ny PM izany fikasana izany. Ny fikasana fanintelony kosa dia nitranga akaiky ny lampihazo nankalazàna ny fifidianana. Na dia efa nampitandrina azy aza ireo mpitandro filaminana, tsy nisasatra niezaka hanantona ilay sehatra hatrany ihany i Martin. Nihetsika tamin'izany i Spasov ka nitrerona azy, “Mieritreritra ny ho aiza ianao?” – nanomboka nitsoaka i Martin, ka nanenjika azy i Spasov. Mampiahiahy ny fikasàna miziriziry hanapaka ny laharan'ny mpitandro filaminana, ary ny asany dia ny hisambotra azy [Martin] sy hitondra azy any amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana. Rehefa nanakaiky azy i Spasov, voafingan'ny tady i Martin, nidona tamin'ny lalan'ny mpandeha tongotra ny lohany ary nitsirara tamin'ny tany izy. Nihevitra izy fa namboarina izany fihetsika izany, ka nodakan'i Spasov moramora tamin'ny tongony izy. Hitan'ity mpitandro filamianana ity fa tsy nahatsiaro tena ilay tovolahy ary niezaka izy hamerina ny ainy. Tsy ela taorian'izay, tonga teny amin'ilay toerana nitrangan'ny zava-drehetra ireo mpitandro filaminana manao fanamiana ary niantso fiara mpamonjy voina. Nilaza tamin'ireo mpiara-miasa aminy i Spasov fa mila miverina any amin'ilay lampihazo [VIP] izy, azy namela azy handeha izy ireo, nefa tsy nangataka azy hampahafantatra ny tenany akory. […] Taty aoriana, nandritra ny fitsaràna, nanambara i Spasov fa nanao fitanana an-tsoratra taorian'io , izay nopotehan'ireo lehibeny.
Ny ankamaroan'ireo vavolombelona dia tsy afaka nanamarina fa i Spasov tokoa ilay namono hitan'izy ireo. Nandritra ny fitsaràna dia hafa ny endriny, tsy tahaka ny tamin'ny fotoana nitrangan'io loza io, fa zary nihanahia sy somary lava volo ary misy volombava [sary ]. Vitsy mihitsy ireo vavolombelona nanamarina fa izy ilay olona; ny ankamaroany dia nanome tantara hafa mikasika ireo zava-nitranga.
Niseho teny amin'ny Lapam-pitsarana ihany koa ireo mpitandro filaminana am-polony tao anatin'ny andiany nisy an'i Spasov izay tany amin'io kianja io iny alina iny. Nilaza i Spasov fa–tahaka azy–nanatanteraka ny andraikiny ihany koa izy ireo tamin'io fotoana io. Izy rehetra, tsy misy anavahana, dia samy nandà izany ary nanambara fa tonga teny amin'ny kianja amin'ny maha-olom-pirenena tsotra azy avokoa izy ireo, ary nifarana alohan'ny sasak'alina ny andraikiny amin'ny asany. Na dia nahitana fifanoherana betsaka indrindra aza tao anatin'ny fanambaran'ireo vavolombelona ireo… Nanohana ny toerana ofisialy noraisin'ny Minisiteran'ny Atitany izy ireo, fa samy niasa izy ireo sy i Spasov ny andro ary nifarana ny 23:30 talohan'ny nanombohan'ny fankalazana ny fandresena tamin'ny fifidianana izany. Nandritra ny andiany farany, nanambara ny Lapam-pitsarana fa tsy dia misy dikany loatra amin'ny filazàna io hetsika io ho “famonoana” ny fanatanterahan'i Spasov na tsia ny andraikiny. Izany fanambarana izany no namarana ny ezany hanamarina fa tany amin'ny toeram-piasany izy tamin'io fotoana io [Fanamarihana: mifandraika amin'ny raharahanà fandraisan'andraikitry ny fibaikoana  izany.]
Nanangona  [mk] ireo zava-tsy nanjary nitranga nandritra ny andiany voalohan'io fitsarana io ilay mpampianatra Najchevska, mifandraika amin'ny fandikana ireo andininy 309, 314, 320, 327, 333, ary 335 anatin'ny Lalàna momba ny Vono olona nataon'ilay mpitsara vavy izay toa nahafinaritra ery nandritra ny fitsaràna:
Talohan'ny nifaranan'ilay fitsarana, nikarakara fifanakalozan-dresaka maro ho an'ny daholobe ny hetsika manohitra ne herisetran'ny mpitandro filaminana. Nandritra ny iray tamin'izy ireo, nisy raharaha manan-danja iray “notsinontsinoavin'ny” lapam-pitsarana nofongarina. Mitantara  [mk] izany ao anatin'ny bilaoginy i Tamara Atanasoska, mafana fo iray:
Sola indray ny lohan'i Spasov rehefa niseho izy, tsy nisy volombava ary nofosana raha nanolotra ny teny famaranany (sary ). Nilaza  [mk] izy fa tsy nidaroka ny lohan'i Martin ka nahafaty azy ary nanamarika ny fandraisan'anjaran'ireo mpitandro filaminana hafa: “Nino aho fa ilay fianjerany no nahatonga ny fahafatesan'ilay zalahy iny, nefa raha mijery sy mandinika tsara ny sarin'ilay “autopsie” (fitsirihana aorian'ny fahafatesana), ho hitanao fa lehibe loatra ho ana totohondry ny faritra hita mason'ny ratra manakaiky ny oron'i Martin, raha tsy mba nandinika akory ilay momba ny dona mafy noho ny fanodinan-doha teo alohany tao amin'ny Lapam-pitsarana…”
Niteny  [mk] i Spasov fa nanana ny antony tsy nahatonga azy hilaza ny marina rehetra sy hanantona avy hatrany ny fianakaviany izy. Raha fantany fa naratra ilay lehilahy, dia mety ho nentiny tany amin'ny toeram-pitsaboana. Niteny izy fa ” Andriamanitra no Vavolombelona” ary nilaza fa nampiasaina izy hisolo vaika ny ankalana: “…raha mitady olona ho melohana ianao – inty aho eto, fa raha ny zava-marina no ilainao, aza mijery ahy!”
Taorian'ny nanambaran'ny Lapam-pitsarana ny didy, nanatanteraka hetsi-panoherana an-dalambe tany Skopje  [mk] ny mpanohitra ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana, mitaky ny fandraisan'andraikitra feno ho an'ireo rehetra voarohirohy amin'io famonoana io.
Ny 19 Janoary, nanatanteraka fifanakalozan-dresaka ho an'ny daholobe momba ny lohahevitra “Mpiray tsikombakomba tamin'ny Famonoana”  ny mpanao fihetsiketsehana “Olom-pirenena ho an'i Masedonia Eoropeana”[mk, hita ao anatin'ny lahatsoratra ny lahatsary iray manontolo] :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/05/27918/
 Hetsi-panoherana Masedonia 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/macedonia-protests-2011/
 topi-mason'io raharaha io: http://www.plusinfo.mk/vest/29765/Retrospektiva-Sedum-meseci-po-ubistvoto-na-Martin-Neshkoski
 sary 1: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2147182679067&set=o.134130019998246&type=1&ref=nf
 sary 2: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2147183319083&set=o.134130019998246&type=1&permPage=1
 fandraisan'andraikitry ny fibaikoana: http://en.wikipedia.org/wiki/Command_responsibility
 hetsi-panoherana an-dalambe tany Skopje: http://www.plusinfo.mk/vest/29934/GALERIJA-Spasov-ne-e-edinstven
 fifanakalozan-dresaka ho an'ny daholobe momba ny lohahevitra “Mpiray tsikombakomba tamin'ny Famonoana”: http://gem.org.mk/vesti/1100-zborno-mesto-soucesnici-vo-zlostorot